The Rohingya News Bank : 2018
In Washington, D.C., Brownback said that the International Religious Freedom’s office has increased its engagement with the NGO community and expanded its religious freedom roundtable held every Tuesday on Capitol Hill.“We have supported religious freedom roundtables starting up in other countries around the world,” he said. “A grassroots movement for religious freedom is beginning to take hold around the world."
Labels: 2018, 2019, en, Religious Freedom, Report, State Department
၂ဝ၁၈ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေ
ရာမဇန် ဥပုသ်လအတွင်း ဘုရားရှိခိုးကျာင်းတခုမှာ ဝတ်ပြုနေသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ။
အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၅၅.၆ သန်းရှိတဲ့အနက် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ခရစ်ယာန်(အများစု၊ ဘက်တစ်၊နဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ်) က ၆ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ မွတ်စလင် အထူးသဖြင့် ဆွန်နီက ၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2018, 2019, mm, RFA Burmese, ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်, သတင်း, အစီရင်ခံစာ
Amid troop build-up in Rohingya's home state, UN appeals to Myanmar for peaceful solution.
9 January 2019 | Peace and Security
Labels: 2018, AA, en, News, Rohingya, UN
Today's News (Quick Search ) December 2018
NEWS TODAY ( December'2018)
Letter to BS: Landslide win for PM Sheikh Hasina in Bangladesh polls The Business Standard
Myanmar’s top 10 business stories of 2018: Kyaukphyu, anti-corruption, Yangon’s new city,… The Myanmar Times
Sheikh Hasina: Bangladesh's icon-turned-iron lady RTE
Rohingya in Canada hope to resettle families after Bangladeshi election Global News
UAE humanitarian aid for Rohingyas and the underprivileged The Star Online
Labels: 2018, December, en, Quick Search
Internet Freedom Sources 2018
Labels: 2018, Dr.Maung Zarni, en, ICC, Nay San Lwin, NLD, Report, Rohingya, UNHRC
( 14.12.2018 ) ရိုဟင်ဂျာတွေ အပေါ်နှိပ် ကွပ်မှု Genocide အဖြစ် ကန်အောက် လွှတ်တော် အတည်ပြု
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ် Genocide သတ်မှတ်ရေး အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်စဉ်။
ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေကို မြန်မာစစ်တပ်က ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့မှုကို Genocide ခေါ် လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် ခေါ်ဆိုသတ်မှတ်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်က တခဲနက် အ တည်ပြု လိုက်ပါပြီ။
Labels: 2018, Genocide, mm, US, USCRIF, ရိုဟင်ဂျာ
( 12.12.2018) Declaring Genocide in Burma
Declaring Genocide in Burma Press Release 12.13.18
Labels: 2018, en, Genocide, News, Rakhine, Rohingya, USCRIF
( 21.11.2018) California က channel တစ်ခုနှင့် ရေဒီယို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။
California က channel တစ်ခုက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီလောက်က repatriation နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာ။
International protection မရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Labels: 2018, Audio, en, mm, Nay San Lwin, မေးမြန်းခန်း
( 21.11.2018 ) တူရကီနိုင်ငံက A News TV ရဲ့ The Brief အစီအစဉ်
တူရကီနိုင်ငံက A News TV ရဲ့ The Brief အစီအစဉ် မှာ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့က ပြောခဲ့တာ။
ရိုဟင်ဂျာတွေက နိုင်ငံတကာအကာအကွယ် အစောင့်အရှောက်မရှိဘဲ လုံးဝ ပြန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Labels: 2018, Nay San Lwin, Video, တူရကီ, သတင်း, မေးမြန်းခန်း
( 20.11.2018 ) ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ လက်ခံနိုင် စရာမရှိ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြား ( VOA )
လူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခံရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပြဿနာလောက် ဆိုးရွားတဲ့ အခြေ အနေမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ ဒီလို မတူကွဲပြားမှုကြောင့် ပစ်မှတ်ထား ဖိနှိပ်ခံရမှုကို လုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမ ရှိ ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် António Guterres က တနင်္လာနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2018, A.Guterres, mm, Rohingya, UN, ဗွီအိုအေ, သတင်း
( 19.11.2018 ) News Today
UN urges calm after shots fired in Rohingya camp in Myanmar Associated Press of Pakistan23:49 Mon, 19 Nov
Myanmar Wantsa‘Systematic Repatriation’ of Rohingya, Social Welfare Minister Says Radio Free Asia22:25 Mon, 19 Nov
Asean speed bumps Bangkok Post21:55 Mon, 19 Nov
Rohingya are now victims of Asean members’ self-interest The Nation18:15 Mon, 19 Nov
Bangladesh pauses Rohingya repatriation plans amid refugee protests Public Radio International17:29 Mon, 19 Nov
Turkish charity provides aid to 1.3M Rohingya Muslims Anadolu Agency15:53 Mon, 19 Nov
UN calls for calm after several Rohingya shot in Rakhine PressTV15:37 Mon, 19 Nov
Rohingya Repatriation: Refugees’ refusal to return to Myanmar shows why international community … The Times of India15:11 Mon, 19 Nov
The international community must guarantee security to Rohingya refugees TRT World13:59 Mon, 19 Nov
Rohingya repatriation may be pushed back to 2019 The Globe and Mail13:21 Mon, 19 Nov
UN calls for calm after shots fired in Rohingya camp in Myanmar Daily Mail11:42 Mon, 19 Nov
Rohingya Crisis: Reaching vulnerable families CAFOD11:27 Mon, 19 Nov
Rohingya Repatriation, Relocation Plans Set to Be Pushed Back to 2019: Govt Official The Irrawaddy04:37 Mon, 19 Nov
Rakhine refugees lured by promise of jobs in Malaysia The Myanmar Times01:36 Mon, 19 Nov
New Zealand offers to help Myanmar resolve Rakhine crisis The Myanmar Times01:36 Mon, 19 Nov
Voice of the Refugee The Statesman00:37 Mon, 19 Nov
Labels: 2018, en, News
( 19.11.2018) မြန်မာ့ လူ့အခွင့် အရေး ဆုံးဖြတ် ချက် ကုလ ချမှတ်
“The Human Rights Situation in Myanmar” မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ဆိုတဲ့ခေါင်း စဉ်နဲ့ မြန်မာ့အရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၇၃ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ တတိယကော်မ တီမှာ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာ- ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်တွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုတွေအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအားလုံးကို ကန့်ကွက်ရှုတ် ချ ထားပြီး၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရေး လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကုလအထွေထွေညီလာခံကြီးက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Labels: 2018, Myanmar, UN, UNGA, ကုလသမဂ္ဂ, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, သတင်း
( 17.11.2018 ) လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက် သူတွေကို ရာထူး အာဏာကနေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ ကုလ တတိယကော်မတီ တောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တာဝန်ရှိ သူတွေကို ရာထူးအာဏာတွေကနေ ဖယ်ရှားအရေးယူဖို့ ကုလသဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ တတိယကော်မတီ အစည်းဝေးက မနေ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2018, EU, mm, Myanmar, OIC, RFA Burmese, UN
( 17.11.2018 ) UN adopts resolution on human rights situation in Myanmar
DHAKA: The third committee of the UN General Assembly in New York has adoptedaresolution byavote on the human rights situation in Myanmar.
Labels: 2018, en, EU, Myanmar, News, OIC, Rohingya, UN
Publish: November 14, 2018
SINGAPORE – The violence which drove 700,000 Rohingya Muslims from Myanmar into Bangladesh was “without excuse”, US Vice President Mike Pence told Aung San Suu Kyi in stinging comments on Wednesday.
Labels: 2018, DASSK, en, Mike Pence, News, SP, US
( 12.11.2018 ) Rohingya shocked, terrified as deadline for Myanmar return nears ( AJ)
Yangon, Myanmar - Abdul fled his burning home last August amidafrenzy of screams, smoke and gunfire.
Labels: 2018, Al Jazeera, Article, en, Nay San Lwin, Rakhine, Rohingya